चिनियाँ राष्ट्रपती सिको रात्री भोजमा गुल्मीको कफी, अरु के के छ मेनुमा ? हेर्नुस् – Gulminews
Home/मुख्य हेडलाईन/चिनियाँ राष्ट्रपती सिको रात्री भोजमा गुल्मीको कफी, अरु के के छ मेनुमा ? हेर्नुस्
चिनियाँ राष्ट्रपती सिको रात्री भोजमा गुल्मीको कफी, अरु के के छ मेनुमा ? हेर्नुस्
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ आश्विन २५, शनिबार २१:०८ मा प्रकाशित
गुल्मी, असौज २५ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई गुल्मीको कफी पिलाईने भएको छ । सिका नेपाली समकक्षी राष्ट्रपती बिद्यादेवी भण्डारीले शनिबार बेलुका काठमाडौं स्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको रात्रीभोज गुल्मीको कफी पिलाईने भएको हो । रात्रीभोजमा ईलामको चिया समेत डेसर्टसँग राखिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी त्रिभुवन विमानस्थलबाट राष्ट्रपति सी बास बस्नका लागि होटल सोल्टी गएका छन् । उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी उनी आइतबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति सीको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको रात्रीभोजमा नेपाली नेताहरुलाई पनि निम्तो दिइएको छ । रात्रीभोजमा केही नेपाली मौलिक परिकार चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई खुवाइने छ ।
मेन्यूअनुसार सुरुमा राष्ट्रपति सीलाई बारा, ममसँगै लुक्लाको सिमी र साँधेको भटमास दिइनेछ । त्यसपछि कुरिलो र क्वाटीको रस दिइनेछ । त्यसपछि युरोपियन र चाइनिज परिकार पस्किइने छ ।
मेन्यू अनुसार अन्तिममा इलामको चिया वा गुल्मीको कफी खाएपछि रात्रीभोज सकिनेछ ।
हेर्नुहोस् रात्रीभोजको मेनु: